ဒူဒူကြီး: Azimuth Thruster
Azimuth Thruster အကြောင်းရေးမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါ၊ ကျွန်တော့် Fleet ထဲက (၂၀၀၈) ခုနှစ် မှာ၊ ရေချခဲ့တဲ့ GRT (၆၂၀၀) ရှိ၊ Product Tanker သဘေ်ာတစီးကို သတိရမိပါတယ်။
သဘေ်ာကို၊ Classification အနေနဲ့ LR - Lloyd Register Classification Society မှာမှတ်ပုံတင်တင် ထားတာဖြစ်ပြီး၊ (၂၀၁၀) ခုနှစ်မှာ Intermediate Survey ဝင်ဖို့အချိန်ကျတဲ့အခါ၊ သက်တမ်း (၁၀) နှစ်အောက်မို့၊ Docking လွန်းမတင်ပဲ၊ IWS ဆိုတဲ့ In Water Survey ကို၊ " ရေ " ထဲမှာတင်လုပ်ဖို့၊ Apply လျှောက်လိုက်ပါတယ်။
IS ဆိုတဲ့ Intermediate Survey ကို၊ IWS အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ၊ IS ရဲ့ Requirements တွေအတိုင်း Bottom Survey including Rudder and Propeller ဆိုတဲ့၊ ခေါင်းစဉ်တခုကိုဆောင်ရွက်ရပါတယ်။
Fig. Propeller shaft with water cooled stern tube bearing
Bottom ဆိုတဲ့ ဝမ်းဗိုက် ခေါါ "သဘေ်ာ အေရာ" ပိုင်းကို မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း၊ Rudder မှ၊ Bearing တွေနဲ့ Rudder Neck, Rudder Stock တို့ရဲ့၊ Clearance ကိုတိုင်းထွာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့၊ Propeller shaft နဲ့ Stern tube တို့ အကြား၊ Stern tube Inboard & Out Board bearing တို့ရဲ့၊ Clearance ကိုတိုင်းထွာခြင်းများ ပါဝင်ပါတယ်။
IS ကို၊ Docking တင်ကာ ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ၊ Clearance တိုင်းထွာခြင်းတွေကို Shipyard သဘေ်ာကျင်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ IS ကို၊ IWS အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ၊ Clearance တိုင်းထွာခြင်းတွေ ကို Classification Societies တွေရဲ့ Class Approved အသိအမှတ်ပြု၊ Diving Team ရေငုတ်အဖွဲ့မှ၊ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Fig. Under water Ship Hull inspection and hull cleaning
Diving Team မှ၊ တိုင်းထွာခြင်းစစ်ဆေးခြင်း ကိစ္စတွေကို၊ ဆောင် ရွက်နေစဉ်၊ ဗီဒီယိုကင်မရာနဲ့ မှတ်တမ်း တင်ကာ Attending Surveyor နဲ့ Attending Superintendent ကိုပြရပါတယ်။
Main Propulsion အဖြစ်၊ Azimuth Thruster ကိုတတ်ဆင်ထားတဲ့အခါ၊ FPP ဆိုတဲ့ Fixed Pitch Propeller System တတ်ဆင် ထားတဲ၊့ သဘေ်ာတွေလို၊ Rudder မှ၊ Bearing တွေနဲ့ Rudder Neck, Rudder Stock တို့ရဲ့၊ Clearance ကိုတိုင်းထွာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့၊ Propeller shaft နဲ့ Stern tube တို့အကြား၊ Stern tube Inboard & Out Board bearing တို့ရဲ့၊ Clearance ကိုတိုင်းထွာခြင်းများပြုလုပ်ဖို့၊ မလို အပ်တော့ပါဘူး။
Fig. Azimuth Thruster Assembly Installation
(၅) နှစ်တကြိမ်ဆောင်ရွက်ရတဲ့၊ Class Renewal သို့မဟုတ် SS လို့ခေါါတဲ့၊ Special Survey ကို Docking တင်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှသာ၊ Thruster Unit တခုလုံးကိုဖြုတ်ချပြီး၊ Overhauling လုပ်ပေးဖို့သာလိုအပ် ပါတယ်။
Thruster Unit တခုလုံးကိုဖြုတ်ချပြီး၊ Overhauling မလုပ်ခင်ကာလအတွင်းမှာတော့၊ အသုံးပြုထားတဲ့ Hydraulic Fluid ဆီ နဲ့ Gear Lubricating Oil တွေကို Sample ယူကာ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ပေးပို့ပြီး၊ Analysis စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် Bearing တွေ၊ Seal တွေနဲ့ Gear Teeth တွေရဲ့ပွန်းစားမှုကို သိစေနိုင်တာမို့၊ (၆) လ တကြိမ် Analysis ပုံမှန်ဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်။
Fig. Azimuth Thruster Gear box, Hydraulic Pump and Hydraulic Motor Assembly
သဘေ်ာတွေမှာ၊ သမရိုးကျ Propulsion နည်းပညာတွေနဲ့ အသားကျနေခဲ့ရာကနေ၊ Mechatronics မက္ကထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်က၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖြည့်စွက်လိုက်တဲ့အခါ၊ Main Propulsion System အနေနဲ့၊ 55 kW ကနေ 8.0MW အထိထိမ်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်တဲ့၊ Rudder လည်းမပါ၊ Propeller Shaft လည်းမပါဝင်တဲ့ Azimuth Thrusters များပေါါပေါက်လာရပါတော့တယ်။
Fig. Azimuth Thruster cross sectional view
Azimuth Thrusters တွေဟာ Conventional form of Propulsion Systems အနေနဲ့ ၊ Rudder, Propeller နဲ့ CPP System တွေကို၊ ပေါင်းစပ်သုံးနေကြအစဉ်အလာဓလေ့မှ၊ Totally eradicated လုံးဝ အဆုံးသတ်စေပြီး၊ One Mechanism လှုပ်ရှားမှုတခုတည်းနဲ့ အကျဉ်းချုပ်ကာဆောင်ရွက်စေပါတယ်။
Material costs, Ship space နဲ့ Energy consumption ကို Conventional System သမရိုးကျစနစ်တွေ ထက်လျှော့ချပေးနိုင်သလို၊ အခြား သမရိုးကျစနစ်တွေများနဲ့နှိုင်းစာရင် Maneuverability ဆိုတဲ့၊ သဘေ်ာ လှုပ်ရှားချည်းကပ် စွမ်းဆောင်ရည်မှာ၊ ပိုမိုသာလွန်ကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Azimuth Thruster မှာ Propeller ကို၊ Pod သို့မဟုတ် Nozzle Ring လို၊ စက်ဝိုင်းပုံ Ring ထဲမှာထိုင်ထား ပါတယ်။ Rudder တွေမှာတော့ Horizontal Direction အရ Port ဘယ် သို့မဟုတ် Star board ညာဘက် ကို (၃၅) ဒီဂရီသာ အများဆုံးရွှေ့လျားနိုင်ပေမယ့်၊ Pod ဟာ Horizontal Direction အရ၊ တပါတ် (၃၆၀) ဒီဂရီလည်ပါတ်နိုင်ပါတယ်။ ပဲ့ပိုင်း Stern မှ၊ Shaft ဟာ ရေထဲမှ Thruster နဲ့ သဘေ်ာအတွင်းရှိ Prime Mover ကို၊ ဆက်သွယ်ပေးထားပါတယ်။ Azimuth Thrusters တွေမှာ Propeller အနေနဲ့ Fixed သို့မ ဟုတ် Re-tractable Type တွေနဲ့ CPP Type တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
Azimuth Thrusters တွေကို၊ Tug Boat တွေထဲမှ Ocean Tug, AHU - Anchor Handling Tug၊ Search & Rescue Tug, Ferry Boat တွေနဲ့၊ GRT တန်ချိန် (၁) သောင်းအောက်၊ ရေယာဉ်တွေအထိတတ်ဆင် အသုံးပြုသလို၊ စစ်ရေယာဉ်တွေ ကနေ Heavy Structures တွေတတ်ဆင်ထားတဲ့ Offshore Drilling ရေ ယာဉ်တွေနဲ့၊ ရေနံတွင်းတူးစင်တွေမှာ DP Dynamic Position Structures တွေအဖြစ်ပါတတ်ဆင်အသုံးပြု ကြပါတယ်။
Azimuth Thrusters တွေကို၊ ၁။ Mechanical Transmission Thrusters နဲ့ ၂။ Electrical Transmission Thrusters တွေရယ်လို့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
၁။ Mechanical Transmission Thrusters
Gear Driven ဂီယာသွားတွေကိုအသုံးပြုမောင်းနှင်တဲ့၊ Mechanical System ကိုအသုံးပြုထားပြီး၊ Primer Mover အနေနဲ့ Engine သို့မဟုတ် Electric Motor ကိုတတ်ဆင်ထားတဲ့ Azimuth Thrusters တွေကို၊ Mechanical Transmission Thrusters တွေလို့ခေါါပါတယ်။ Shafting Arrangement ပေါါမူတည်ပြီး၊ L Drive နဲ့ Z Drive ရယ်လို့ထပ်မံခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
၂။ Electrical Transmission Thrusters
Mechanical Linkage တွေမပါပဲ၊ Electric Motor ကို၊ Pod ထဲမှာတတ်ဆင်မောင်းနှင်တဲ့၊ Azimuth Thrusters တွေကို၊ Electrical Transmission Thrusters တွေလို့ခေါါပါတယ်။ Electric Motor တွေ ကိုမောင်းနှင်ဖို့လိုအပ်တဲ့၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား Power ကို၊ သဘေ်ာရဲ့ Main Power Distribution System မှတစ်ဆင့်ရယူပါတယ်။ လက်ရှိ Offshore Drilling Vessel တွေမှာတတ်ဆင်အသုံးပြုကြတာကို၊ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Image credit to : http://www.offshore-technology.com, http://www.thrustmastertexas.com, http://www.hydrex.be, http://www.turvac.com, http://www.tpub.com, http://www.turkishmaritime.com.tr,
Posted by ဒူဒူကြီး at 05:53